Cookies ဆိုတာဘာလဲ.... - .::just for share::.
Home » နည်းပညာ » အတိုအထွာ » Cookies ဆိုတာဘာလဲ....
Cookies ဆိုတာဘာလဲ....hacker တွေစားတယ့်မုန့်တွေပါ Security အတွက်တစ်ဖက်တစ်လှန်းကနေကာကွယ်တာမျိုးလေးပါခင်မျာ
အမှန်တော့ Cookies ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ဗိုက်ဆာရင်စားတယ့်မုန့်မဟုတ်ပါဘူး
hacker hacker ဆိုလို့ ကျွန်တော့်ကို hacker လို့တော့မထင်ပါနဲ့ ဘာမှမသိပါဘူး အမျိုးအစားနှစ်ခုရှိတယ်လို့မှတ်ထားလိုက်ပါ ...အမြဲတမ်းရှိနေတယ့်(Permanentcookies)နဲ့ယာယီအနေနဲ့ပဲရှိတယ့်(temp cookies )ဆိုပြီးရှိပါတယ်...ဒီလိုရှိနေတယ့် Cookies တွေက သူငယ်ချင်းတို့အပေါ်
ကိုဘယ်လိုသက်ေ၇ာက်မှုရှိလဲဆိုတော့...သူငယ်ချင်းတုိ့ Browser တစ်ခုကိုသုံးပြီးသွားခဲ့သမျှဝက်ဘ်ဆိုက်နိမ်းတွေ နေ့စွဲတွေ စသည့်လုပ်ဆောင်ချက်မှန်သမျှကို စုဆောင်းထားတယ့် text
ဖိုင်များကိုဆိုလိုတာပါ....ဥပမာ Gmail ကို Browser တစ်ခုခုသုံးလိုက်ပြီးဝင်လိုက်တယ်ဆိုပါဆို့
ဒါဆိုရင် သူငယ်ချင်းတို့ရဲ့password တွေ user name တွေက cookies ခေါ် text ဖိုင်တွေအဖြစ်browser ထဲမှာ၇ှိနေမှာပါ....သူငယ်တို့ကတော့ log out ထွက်လိုက်ရင် ရပြီလို့ထင်ကောင်းထင်နိုင်ပေမယ့် ဒီ cookies အဖြစ်ရှိနေသေးတယ့် password နဲ့ user name တွေကတော့ ကွန်ပျူတာ
မပိတ်မချင်းကို ရှိနေအုံးမှာပါ...ဒါက(temp cookies)အနေနဲ့ပြောတာပါ....Permanent cookiesအနေနဲ့ကတော့ ကွန်ပျူတာပိတ်လိုက်လည်း ID,Nameလောက်တော့Hard disk ထဲမှာကျန်နေအုံးမှာပါ...ဒီလိုမှတ်တမ်းတွေအဖြစ်ရှိနေမယ့် Text ဖိုင် cookies တွေကို hackerတွေကနည်းလမ်းများစွာနဲ့ရဖို့ကြိုးစားကြပါတယ်....ဒီလိုနည်းလမ်းတစ်ခုခုနဲ့ရသွားပြီဆိုပါဆို့ ဒီ Cookies တွေကို သူတို့ရဲ့Cookiesထားရာနေရာမှာ Upload ဖြင့်ထည့်လိုက်ပြီး Browser ကိုဖွင့်သုံးလိုက်တာနဲ့ သူငယ်ချင်းတို့သုံးနေသလိုသူသုံးလို့ရသွားပါပြီ ...ပြီးတော့ အခုအချိန်မှာ Cookies တွေကို ဖြေထုတ်ယူနိုင်တယ့်တစ်နည်းအားဖြင့် ဘာသာပြန်ပေးနိုင်တယ့် Software တွေအများကြီးရှိနေပါပြီ...ဒါကြောင့်Securityပိုင်းအနေနဲ့ Cookies ကဘယ်လောက်ေ၇းပါလဲဆိုတာ သူငယ်ချင်းတုိ့ဒီလောက်ဆိုသဘောပေါက်လောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်...ဒီတော့ဒီCookiesတွေကိုမိမိတို့စက်ထဲမှာကဘယ်နေရာတွေမှာရှိနေမလဲဆိုတာသိဖုိ့လိုလာပါပြီ...ဒီလိုရှာလိုက်ပါ...C:\_Users\_CurrentUser name\_App Data\_Roaming\_Microsoft|Windows\_Cookies မှာရှာကြည့်ပါ ...ဒါကစက်ထဲမှာမပျက်ပဲရှိနေမယ့်နေရာကိုပြောတာပါ...Browser အနေနဲ့ကတော့ ယာယီ Cookies ပေါ့သူကတော့ကွန်ပျူတာပိတ်လိုက်တယ့်အချိန်မှာမရှိနိုင်တော့ပါဘူး...ဥပမာ..IE Browser သုံးတယ်ဆိုရင်တော့ ဒါတွေလုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်....Tool Menu အတွင်းမှ Internet options ကိုဖွင့် General Tab အောက်ရှိDelete Browing history မှာအမှတ်ခြစ်ပေးပါ....Security Tab အောက်ရှိ Security Level Barကို High ထားပေးလိုက်ပါ Enable protechted mode ကိုအမှတ်ခြစ်ပါ...Privacy Tab အောက်မှာတော့ သူငယ်ချင်းတို့သိချင်နေတယ့် Cookies Setting Bar ကိုအမြင့်ဆုံး Block All Cookiesထားပေးလိုက်ပါ ...ဒါဆိုရင် Cookies တွေကိုယူဆောင်ခွင့်လုံးဝမပြုတော့ပါဘူး Content Tab အောက်ရှိ Auto Complete တွေ Setting ကိုရွေးနှိပ်ပြီး Auto Complete SettingBox တွင်ရှိသမျှအမှတ်တွေကိုဖြုတ်လိုက်ပါ ..User Name and passwords on forms ကိုအမှတ်တပ်ထားရင် သူငယ်ချင်းတို့ Browser ကိုသုံးပြီး ထည့်သွင်းခဲ့သမျှ User name and password ကိုမဖြတ်ထားဘဲရှိနေမှာပါဒီလောက်ဆို cookie အကြောင်း နည်းနည်းသဘောပေါက်မယ်လို့ထင်ပါတယ် ကျွန်တော်သိသလောက်ရေးပြတာပါအမှားပါရင်နားလည်းပေးစေချင်ပါတယ်ခင်မျာ
Labels: နည်းပညာ, အတိုအထွာ